Muxuu Yahay Rikoorka uusan wali haysan Lionel Messi?
US says Eritrean forces must always go away Tigray
Uganda denies claims the UPDF killed 189 activists in
top voltage within the Nationwide Meeting
Kenya diyaar uma ahan inay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya “Kala bixitaanka…
Askarta Israa’iil waxay toogasho ku dileen ilmo yar oo Falastiini ah! – Axadle
Abidjan: fashion of bandana
“Hadalka Gudiga Xaqiiqo Raadinta ee IGAD waa sumad madow oo dalka ku taal” –…
By axadle	 On Jan 11, 2021
Xiddiga Juventus Cristiano Ronaldo ayaa xalay dhigay rikoor kale oo cajiib ah wuxuuna xoojiyay rikoorkiisa CV isagoo sii joogaya kulankii shalay ay 3-1 kaga badiyeen Sasuolo.
Arsenal oo ku dhawaaqday saxiixa cusub
WARAR SUGAN: Ibraahim baa hadlay
Ronaldo ayaa dhaliyay goolkiisii ​​15-aad ee xilli ciyaareedka, goolkiisii ​​15-aad ee 15 xilli ciyaareed oo xiriir ah, taas oo ka dhigaysa xiddigii ugu horeeyay ee gool ka dhaliya dhamaan shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub 15 sano oo xiriir ah. ugu yaraan 15 gool midkiiba.
Tababaraha reer Portugal ayaa markii ugu horeysay dhaliyay labo gool xilli ciyaareedkii 2006-07 ee kooxda Manchester United, isagoo dhaliyay 17 gool 34 kulan oo Premier League ah.
36 jirkaan, oo 36 jirsanaya bisha Febraayo ee soo socota, ayaa sii wada qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah, waxaana uu dhigay rikoor cusub oo Serie A ah.
Xilli ciyaareedkii ugu fiicnaa ee Ronaldo ee Spain wuxuu ahaa 2014-15, markaasoo uu dhaliyay 48 gool kaliya 35 kulan oo La Liga ah, taasoo la micno ah inuu dhaliyay seddex gool labo kulan oo uu ciyaaray.
Lionel Messi (Sawirka midig) wuxuu ahaa ninka ay xafiiltamaan ee ugu weynaa intii uu garoonka ku jiray, isagoo dhaliyay 15 gool 12 xilli ciyaareed oo isku xigta, laga bilaabo 2008-09 isagoo dhaliyay 11 gool oo La Liga ah isla markaana saxiixay sanadkan. 13 goolal.
Laakiin waxa ugu weyn ee xalay Ronaldo ahaa in Sassuolo ay ahayd kooxdii dhalisay goolkiisii ​​ugu horeeyay ee Serie A markii uu ku biiray Juventus, waxayna ciyaartu ku dhamaatay 2-1 oo ay ku badisay Juventus. dhacay Sebtember 2018.
axadle 6353 posts
CAJIIB: Xasuuqii Tottenham Hotspur
Coronavirus in Africa: “Disaster did not